ओलीको नक्कल गरेपछि नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्री पद धरापमा, के गरे त्यस्तो ? — Sanchar Kendra
ओलीको नक्कल गरेपछि नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्री पद धरापमा, के गरे त्यस्तो ?
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भाइरल भएका छन् । कोरोनाविरुद्धको खोप प्रमाणपत्रमा आफ्नो तस्वीर राखेपछि उनी भाइरल भएका हुन् । उनको यो कदमका विरुद्धमा केरला हाइकोर्टमा मुद्धा परेको छ । यो विषयमा परेको मुद्दाबारे आगामी साता केरला हाइकोर्टमा सुनुवाइ हुने छ । पीटर नामका एक व्यक्तिले खोप प्रमाणपत्रमा मोदीको तस्वीर राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।
‘लोकतन्त्रमा यस्तो कार्य एकदमै अनुचित छ । राष्ट्र अर्थात व्यक्तिका लागि यस्तो प्रयोगको कुनै अर्थ छैन ।’ गत अगस्टमा संसदमा बोल्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भारती प्रवीण पवारले ‘ठूलो सार्वजनिक हित’का लागि प्रमाणपत्रमा प्रधानमन्त्रीको तस्वीर राखिएको बताएकी थिइन् । खोप लगाएपछि पनि कोरोनाबाट बच्नका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड पालनामा प्रेरित गर्न प्रमाणपत्रमा मोदीको तस्वीर राखिएको उनको तर्क थियो ।
उनले एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न गरेकी छन्, ‘मानौं म तपाईंको समर्थक होइन, मलाई तपाईं मन पर्दैन । तर पनि मैले यो राख्नु उचित हुन्छ ? नागरिकको स्वतन्त्रता कहाँ छ ?’ खोप प्रमाणपत्रमा अंकित यही तस्वीरका कारण वैदेशिक यात्रा गरिरहेका केही भारतीय यात्रुहरुलाई समस्या पनि भएको थियो । भाइस न्यूजको एक रिपोर्ट अनुसार प्रमाणपत्रमा अंकित मोदीको तस्वीरका कारण एक इमिग्रेसन अधिकारीले केही यात्रुलाई जालसाजीको आरोप लगाएका थिए ।